संसार बदल्ने ७ वेवसाइटहरुको नाली बेली | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← परम्परालाई तोड्दै बुहारीको ‘कन्यादान’
भाइले मुस्लोले हान्दा दाइको मृत्यु →
संसार बदल्ने ७ वेवसाइटहरुको नाली बेली
Posted on 08/03/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
यी ती वेवसाइट हुन जुन छैनन् भने आज इन्टरनेट र जीवनको कल्पना गर्न कठिन छ। जो कुनै व्यक्तिले पनि एक पटक इन्टरनेटको प्रयोग गरेको छ भने उसले यी सबै वा यसमध्ये अधिकांश साइटमा ब्राउज गरेको हुनुपर्छ । यी साइटहरु स्वयममा एउटा उदाहरण हुन्-
सुरुवातः १५ जनवरी २००१
निर्माताः जिम्मी वालेस, ल्यारी सैंगर
जानकारी प्राप्त गर्न सकिने सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो विकीपेडिया । आज कुनै पनि विषयमा आधारित खोज गर्नुस् पहिलो लिंक तपाईले विकीपेडियाकै पाउनु हुनेछ । विकीपेडियाको आगमनअघि पनि अनलाइन इन्साक्लोपेडिया त कैयौं थिए तर ती सबैमा कमै मात्र जानकारी हुने गर्दथ्यो र ’emको प्रयोग पनि कठिन थियो । तर विकीपेडियाको आगमनसँगै पुरै परिस्थितिमा परिवर्तन आयो । विकीपेडिया एउटा निःशुल्क ज्ञानकोष हो । यसलाई कुनै पनि व्यक्तिले सम्पादन गर्न सक्दछ र लाखौ स्वयमसेवकका कारण हरेक दिन यसको ज्ञानकोषको उचाई कयौं गुना बढिरहेको छ। आजभोलि यो ज्ञानकोष अंग्रेजीमा मात्र नभएर नेपालीलगायत हरेक भाषामा उपलव्ध छ।
सुरुवातः ४ जुलाई १९९६
निर्माताः शब्बीर भाटिया र अन्य
आजको नयाँ पिढीले यो नाम पहिचान गरुन वा पहिचानका लागि ध्यान नदिउन् तर हटमेलले कुनै समय इमेलको परिभाषा नै बदलिदिएको थियो । हटमेलभन्दा पहिला इमेल गर्नु र इमेल प्राप्त गर्नु दुर्लभ कार्य थियो । अनलाइन इमेल क्लाइन्ट सफ्टवेयर उपलव्ध थिएन । तपाई जब इमेललाई आफ्नो एक पीसीमा डाउनलोड गर्नुहुन्थ्यो तब रिमोट सर्भरबाट त्यो डिलेट हुने गर्दथ्यो । अर्थात एउटा इमेल एक स्थानमा मात्र हेर्न सकिन्थ्यो । हटमेलले वेभमेलको सुरुवात गर्‍यो । हटमेललाई कुनै पनि पीसीमा ब्राउज गर्न सकिन्थ्यो । कुनै इमेललाई कयौ स्थानबाट खोल्न सकिन्थ्यो । शब्बीर भाटिया र केही अन्य व्यक्तिको यो खोजले इमेल गर्ने तौरतरिकामै बदलाव ल्यायो । पछि माइक्रोसफ्टले हटमेल किन्यो र अहिले यो ब्राण्ड समाप्त भइसक्यो । त्यसको स्थान माइक्रोसफ्ट लाइभ मेलले लिएको छ। तर, हटमेलको याद मानिसहरु अहिले पनि गर्दछन् ।
सुरुवातः ४ फेब्रुअरी २००४
निर्माताः मार्क जकरवर्ग
फेसबुक विश्वको सबैभन्दा लोकप्रीय सामाजिक सञ्जाल साइट हो । अमेरिकाजस्ता देशमा त यसले गुगललाई पनि उछिनेर सबैभन्दा लोकप्रीय साइटको गौरव पनि प्राप्त गरिसकेको छ। फेसबुकका प्रयोगकर्ताहरु करोडौको संख्यामा छन् र कैयौ मानिसको त दिन र रात फेसबुकमै बित्ने गरेको छ।तर फेसबुक पहिलो सामाजिक सञ्जाल साइट भने थिएन । तर, यसले सामाजिक सञ्जालको सिद्धान्त नै परिवर्तन गरिदियो । फेसबुकले थर्ड पार्टी एप्लिकेशनहरुलाई मन्जुरी दिएर आफ्नो लोकप्रीयतामा तिब्रताका साथ बढायो । फेसबुक लोकप्रीय बनिरह्यो ’cause उसले आफूलाई समय अनुसार परिर्वतन गर्दै गयो
निर्माताः ज्याक डोर्सी, इवान विलियम्स, विज स्टोन
के राजनेता, के अभिनेता, के समाजसेवी, के धर्मगुरु, के आम नागरिक । आज सबैजसो ट्वीटरमा उपस्थित छन् । १४० अक्षरका साथ तपाई संसारभरसँग जोडिन सक्नु हुन्छ। के केही वर्ष पहिलेसम्म कुनै कल्पना गर्न सक्दथ्यो कि एउटा सामान्य व्यक्ति विल गेट्सलगायतका चर्चित हस्तीहरुसँग सिधा प्रश्न गर्न सक्छ कि आफूले उत्तर पनि पाउने गरी । यो ट्वीटरकै कमाल हो, जसले आम र विशेषको भेद मेटाइदियो । अब हरेक ‘विशेष’ व्यक्ति ट्वीटरको माध्यमबाट आम संसारसंग जोडिन चाहन्छ । संसारभरको सरकारका सरकारहरु यो सेवादेखि डराउन थालिसकेका छन् । ’cause सूचनाको अति तिब्र माध्यम क्षणभरमा पलपलको खबर संसारको कुनाकुनामा पुर्‍याइरहेको छ। ट्वीटर आज जीवनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।
सुरुवातः फेब्रुअरी २००५
निर्माताः चाड हर्ली, जावेद, करिब, स्टीभ चैन
अधिग्रहण : गुगल (२००६)
युट्युवले मनोरञ्जनको अर्थ नै परिवर्तन गरिदियो । युट्युवभन्दा पहिला अनलाइन भिडियो हेर्न सकिने राम्रो माध्यम थिएन । युट्युवको सुरुवात जब भयो तब विश्वभर निकै ब्याण्डविथ नै उपलव्ध थिएन । त्यतिबेला मानिसहरु सोच्थे यो साइट चल्दैन । ’cause लामा लामा भिडियो मानिसहरुले कसरी हेर्नेछन्? मानिसहरु आफ्नो साइटमा भिडियो अपलोड गर्दैन थिए किनकि यसबाट उनीहरुको ब्याण्डविथ खर्च ह्वात्तै बढाउथ्यो । तर युट्युवको आगमनका साथै परिस्थिति बदलियो । युट्युवले मानिसहरुलाई अचम्ममा पार्‍यो । अब निःशुल्क भिडियो अपलोड गर्न सकिन्थ्यो र त्यसलाई कुनै पनि साइटमा राख्न पनि सकिन्थ्यो । अहिले गुगलले लिएको यो सेवामा हजारौ भिडियो दैनिक अपलोड हुने गर्दछन् । र, लाखौ मानिस यो भिडियो हेर्ने गर्दछन् ।
सुरुवातः ४ सेप्टेम्बर १९९८
निर्माताः सर्जेई विन, लारेन्स पैज
नाम मात्रै पर्याप्त छ । इन्टरनेट’bout सामान्य मात्र ज्ञान राख्ने शायदै कुनै व्यक्ति होलान् जो गुगलका विषयमा थाहा नहोस् । गुगल अर्थात खोज खोज अर्थात गुगल । यतिबेला मानिसहरु भौतिक सामग्री हराए पनि झक्किएर गुगलमा खोजी गर्न जाने बेला भइसकेको छ। मानिसहरु भन्छन्, कुनै जानकारी चाहियो गुगलमा जानुस् न ।अहिले इन्टरनेटमा चाहे जेसुकै गरियोस प्रयोगकर्ताहरु गुगलमा एक पटक जान्छन् । गुगलमा खोजी नगरे पनि यसका असंख्य निःशुल्क सेवाको प्रयोग सबैले गर्छन । जीमेल छ, रिडर छ, ब्लगपोष्ट छ, पिकासा छ, युट्युव छ, सूची लामो हुनेछ । आफै सोच्नुस्।
निर्माताः जैफरी विजोज
किनमेल त्यसै पनि हुन सक्दछ। पसल नै नगई घरै बसेर लगइन गर्नुस् । आफूले मन पराएको उत्पादन छान्नुस् । क्रेडिट कार्डबाट शुल्क तिर्नुस् काम सकियो । घरमै बसेर तपाईलाई आफूले किनेको सामान प्राप्त हुनेछ। अमेजनले मानिसहरुको किनमेलको बानी नै परिवर्तन गरिदियो । अहिले इन्टरनेटमा असंख्य अनलाइन सपिङ्ग साइट छन् तर यस उद्योगको सुरुवात अमेजनले नै गरेको थियो ।
This entry was posted in विज्ञान प्रविधि. Bookmark the permalink.
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् जनवरी 2020 (36) डिसेम्बर 2019 (69) नोभेम्बर 2019 (49) अक्टोबर 2019 (55) सेप्टेम्बर 2019 (59) अगस्ट 2019 (62) जुलाई 2019 (67) जुन 2019 (73) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)
नेपाल मगर संघ शाखा युएईको “माघ्या सकराती मेला तथा बृहत् सांस्कृतिक साँझ २०७६”को तयारी पुरा ।
दोश्रो न्यु बोइज कप-२०२० हिपात एफ सि दुबाईको पोल्टामा ।
अनेसास कुवेत च्याप्टर द्वारा आगामी १४ फेब्रुअरी "काव्य प्रवाह शृङ्खला" गर्दै